Reuters | Dr Ko Ko Gyi's Blog
As storm moves in, NGOs urge Myanmar to move Muslim IDPs out Source: Thomson Reuters Foundation – Tue, 14 May 2013 07:25 AM Author: Thomson Reuters Foundation Correspondent
Tags:Burma, Myanmar, Pauktaw Township, Rakhine, Rakhine State, Reuters, Rohingya people, Sittwe
If she wants to beaworld class leader, she should reply the letters esp written by world leaders.
Tun Dr M and Datin Sri Dr. Wan Aziza’s letter were totally ignored by Daw Aung San Suu Kyi.
For the ordinary NLD members or leaders and other public letters, she should hireaclerk andasecretary to just reply.
My letters to the First PM of Malaysia (written when I was in Myanmar) and other PM, DPMs, Singapore Former PM were at least answered by their secretaries. On line letters to various great leaders around the world were replied at least with acknowledged receipts.
Now even Daw Suu‘s NLD local leaders are facing the stone wall when try to contact her.
ဧပြီ-၁၈ -၂၀၁၃ ရိုက်တာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မိမိနိုင်ငံတွင်းရှိ လူနည်းစုမွတ်စ်လင်မ်တို့၏အခြေအနေမှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအား လုံခြုံမှုရရှိစေရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
Tags:Aung San, Aung San Suu Kyi, Burma, Malaysia, Myanmar, Politics, Reuters, Thein Sein
Reuters’ Special Report – Witnesses tell of organized killings of Myanmar Muslims
Special Report – Witnesses tell of organized killings of Myanmar Muslims By Jason Szep and Andrew R.C. Marshall PAIK THAY
(Reuters) – Onahot Sunday night inaremote Myanmar village, Tun Naing punched his wife and unleashed hell.
Tags:Buddhism, Burma, Islam in Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Reuters, Rohingya people
Tags:Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Reuters, Rohingya, Rohingya people, United Nations
Source: အစိုးရပိုင်သတင်းစာများရဲ့ ချိုးနှိမ်တဲ့၊ ခွဲခြားတဲ့ ၊ စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်း
တူမောင်ညို။ ဇွန်လ ၆၊ ၂၀၁၂ မိုးမခ မီဒီယာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မေလ ၂၈ ရက်နေ့ ရမ်းဗြဲမြိုနယ်၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မ —- ကို သားမယားပြုကျင့်ပြီး ဓါးနဲ့ထိုးသတ်တာဟာ သိပ်ဆိုးပါတယ်။
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က သံတွဲ – တောင်ကုတ် ကားလမ်းဆုံတွင် ရိုးမသစ္စာခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်ပေါ်မှာ လူ ၁၀ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုဟာလည်း အလွန်ဆိုးပါတယ်။
ဇွန် ၅ ရက်နေ့၊ အစိုးရပိုင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ( ကြေးမုံ၊မြန်မာ့အလင်း၊ NLM) တို့တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော စကားလုံး သုံးစွဲမှုက ပိုပြီးတော့ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ပြဿနာကို ပိုမိုကြီးထွားလာအောင် မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးတဲ့သဘော၊ “ဆွ”ပေးတဲ့ သဘှောဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီစကားလုံးအတိုင်းပဲ ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်သံမီဒီယာတွေကနေလည်း လွှင့်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Tags:Burma, Islam in Burma, June 2012, Muslim, Mya Aye, Rakhine State, Reuters, Yangon
Tags:Anders Behring Breivik, Breivik, Marxism, Norway, Norwegian, Oslo, Rainbow, Reuters
Tags:Driving, London, Newcastle University, Old age, Quality of Life, Reuters, Sydney Harbour Bridge, Technology